Sweden oo ku biirtay ololaha Libya | Somaliska
3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Sweden ayaa u duulay gobolka Sardinia ee Talyaaniga si ay ugu biiraan ololaha ka dhan ah hogaamiyaha Libya Mucamar AlQadafi. Axada ayaa waxaa sidoo kale duuli doona 5 diyaaradaha dagaalka ah iyo 4 xamuulka qaada. Diyaaradaha ayaa ku biiri doona kuwa kale ee ay leedahay xulufada NATO ee duqeynta ka wada Libya. Jimcadii ayaa baarlamaanka Sweden isku raacay in Sweden ay ku biirto mishinka Libya balse waxay ku heshiiyeen in Sweden aysan duqeynta Libya ka qeyb qaadaneyn balse oo keliya ay ilaalinayaan hawada Libya. Sidii aan horey uga faalooney dowlada Sweden ayaa aad ugu heelaneyd in ay ka qeyb gasho mishinka Libya. Olalaha lagaga soo horjeedo Qadafi ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya wadamo badan oo ay ku jiraan kuwo carbeed sida Qatar iyo UAE.
Sweden oo ku biirtay ololaha Libya
3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Sweden ayaa u duulay gobolka Sardinia ee Talyaaniga si ay ugu biiraan ololaha ka dhan ah hogaamiyaha Libya Mucamar AlQadafi. Axada ayaa waxaa sidoo kale duuli doona 5 diyaaradaha dagaalka ah iyo 4 xamuulka qaada.
Diyaaradaha ayaa ku biiri doona kuwa kale ee ay leedahay xulufada NATO ee duqeynta ka wada Libya. Jimcadii ayaa baarlamaanka Sweden isku raacay in Sweden ay ku biirto mishinka Libya balse waxay ku heshiiyeen in Sweden aysan duqeynta Libya ka qeyb qaadaneyn balse oo keliya ay ilaalinayaan hawada Libya.
Sidii aan horey uga faalooney dowlada Sweden ayaa aad ugu heelaneyd in ay ka qeyb gasho mishinka Libya. Olalaha lagaga soo horjeedo Qadafi ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya wadamo badan oo ay ku jiraan kuwo carbeed sida Qatar iyo UAE.
xuseen cali says:
April 2, 2011 at 10:04
hajabeen gaal faaiido maleh waxay isku xulafaysteen sidayliibiyasheedaal keedauguran lahaayeen jab gaalooy dhacgaalooy baabagaalooy gaalo faaiido maleh muslinacayb ayaaheerkaagaar siisay
Qabiilkayga waa Muslim says:
April 2, 2011 at 20:05
”Ninkii soo joog laga waayo soo jiifaa laga helaa”
Wallee Sweden shaatigeeda in aysan iska wasaqayn ayaa u haboon , oo aysan maraykanka ka daba habaabin .
Maxaa yeelay Muwaadiniinta Maraykanka ah Aduunka , si cabsi la’aana kuma mushaaxaan , oo Pass-kooda waa u baqaan iyo dhalashadooda. Waxaana waxaa u keenay wiilashooda aysan gacmaha ka qaban . Sweden ayada waxaa ugu wacan in ay ilaashato sharafteeda Pass-ka.
Maxaa yeelay ninkii Guri Islaameed guba , kiisana waa la gubaa .
Marka Swedeneey , Korov-kaaga iska cun , iyo Köttbullar-kaa Dunidaan is ruursanee ha geline.